यस्ता ठाउँमा पाइने च्याउ खानु त के छुनुसम्म हुँदैन, थाहापाइराख्नुहोस - ज्ञानविज्ञान
वर्षा शुरु भएसँगै जङ्गलमा च्याउ उम्रने र त्यही च्याउ तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्दा विषाक्त भई कतिपयको ज्यानै जाने पौडेलले बताए । अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा यस्ता बिरामी लामो समय राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा भोजराज अधिकारी सबै च्याउ सामान्य नभएर विषालु हुने बताउँछन् । विशेषगरी वनको च्याउ बढी विषालु हुने र तिनमा विष देखिने गर्दछन् ।
त्यस्ता च्याउमा हरेक वर्ष हरेक समय फरक फरक विष देखिने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । च्याउको जात सामान्यतया झट्ट हेर्दा उस्तै उस्तै हुने हुनाले कुन बढी विषालु हो र होइन भनेर मानिसलाई छुट्याउन कठिन हुने उनले बताए । जानकारीको अभावमा कुन च्याउ विषाक्त हो भनेर पहिचान गर्न नसक्दा समस्या देखिने गरेको छ ।
अधिकारीले भने, “यिनीहरुमा पहिलेनै तयारी विष हुन्छ, ती कीटाणु होइनन् ।” यिनीहरुले सोझै शरीरको कलेजो, मिर्गौला र आन्द्रामा असर गरेर अचानक पखाला लाग्ने, बान्ता हुने, रक्तचाप घट्ने, पिसाब कमी भएर मिर्गौलाले काम नगर्ने, जण्डिस देखिने, मुटुको धड्कन कम हुनेजस्ता लक्षण देखिने उनको भनाइ छ । विषालु च्याउ खाएर अस्पताल आउने बिरामीमा विषलाई सिधै कम (न्यूट्रलाइज) गर्ने पदार्थ नहुने हुनाले उनीहरुलाई सहयोग गरेर जुन अङ्गमा असर छ त्यसलाई औषधि प्रयोग गरी जोगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
विष रोक्ने औषधि नहुने भएकाले त्यसले शरीरका कुन अङ्गलाई असर गरेको छ त्यही अङ्गको उपचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीले समाजमा यस्ता खालका च्याउहरु पखालेर, उमालेर खायो भने विष जान्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन सुझाव दिए । च्याउलाई उमाल्दैमा विष नजाने उनको भनाइ छ । पहिले हल्का हल्का विष लाग्यो भने अरु केहीले होला भन्ने सोचेर पुनः च्याउ खाने प्रचलन रहेको भन्दै यस्तो गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
अधिकारीले एउटै ढुसीमा पछि पनि विष कडा खालको बन्ने गरेको बताए । वनको च्याउ नचिनी नखान र थाहा नपाई खाइहालेमा तत्काल अस्पताल पुग्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार च्याउ खाएको छ घण्टाभित्रमा अस्पताल आएमा ९० प्रतिशत बच्छन् भने दुई दिनपछि आउँदा ४० प्रतिशतलाई मात्र बचाउन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र रहेको इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख गीता गुरुङले च्याउ खाएर बिरामी पर्ने अधिकांश ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका हुने गरेको बताए । आर्थिक अभावका कारण दैनिक छाक टार्ने क्रममा पोषिलो खाना खोज्दै गर्दा च्याउलगायतका वनका कन्दमूल खान बाध्य हुने अवस्था रहेको छ । गुरुङले च्याउ किनेर मात्र खान अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । उनले भुईंच्याउ खानै नहुने बताए ।
च्याउ खेती गर्ने तरिका :
1. धेरैलाई कम जानकारी भएको वास्तवमा च्याउ भनेको के हो ?
2. च्याउ कति प्रकारका हुन्छन् ?
3. गोब्रे च्याउकस्तो ठाउँमा खेती गरिन्छ ?
4. गोब्रेच्याउको लागि कतिसम्मको तापक्रम उचित हुन्छ ?
5. गोब्रेच्याउ उत्पादन गर्न सापेक्षिक आर्द्रता कति हुनु पर्दछ ?
6. गोब्रेच्याउ उत्पादन गर्न हावा संचालन र उज्यालोको व्यवस्था कस्तो हुनु जरुरी हुन्छ ?
7. च्याउको बीउ/स्पान कस्तो हुनुपर्दछ ?
8. गोब्रे च्याउ खेती गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
9. गोब्रे च्याउ खेती गर्न कम्पोष्ट मलको तयारी कसरी गर्नु पर्दछ ?
10. गोब्रे च्याउ खेती गर्दा कुन कुन आधारभूत कुराहरुमा विशेष ध्यान पुर्यारउनु पर्दछ ?
11. कम्पोष्टमल तयारगर्नेविधि पनि बताई दिनु हुन्थ्यो कि?
12. कम्पोष्टमल तयारगर्दा शुरुमा के गर्नु पर्दछ ?
13. कम्पोष्ट तयार गर्दा बीच बीचमा पल्टाउनु जरुरी हुन्छ?
14. पहिलो पल्टाई कति दिन पछि र के के गर्नु पर्दछ?
15. दोश्रो पल्टाई कति दिन पछि र के प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ?
16. तेश्रो पल्टाई कति दिन पछि गर्नु उचित होला?
17. चौथो पल्टाई कति दिन पछि गर्नु पर्दछ र कुनै सामाग्री थप गर्नु पर्दछ कि?
18. पाँचौं पल्टाई कति दिन पछि गर्नु पर्ला र यस पटक के के थप सामाग्री राख्नु पर्ला ?
19. छैठों पल्टाई चाहिं कति दिन पछि गर्नु पर्ने हुन्छ ?
20. सातौं पल्टाई कति दिनमा गर्नु पर्ला ?
21. आठौं पल्टाई कति दिनमा गर्नु पर्ला र यस बेलामा के के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला ?
22. गोब्रे च्याउखेतीको लागि ब्याड कसरी तयार गर्नु पर्दछ ?
23. गोब्रे च्याउको बीउ/स्पान रोप्दा के कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ला ?
24. बीउ कति गहिराईमा र कसरी रोप्नु पर्दछ ?
25. ब्याडमा चिस्यानको मात्रा कसरी कायम राख्ने ?
26. ब्याडलाई छोप्ने/केसिङ्ग गर्ने माटोको तयारी कसरी गरिन्छ ?
27. ब्याड छोप्ने माटोलाई उपचार पनि गर्नु पर्ला ?
28. उपचार गरिएको माटोलाई कसरी प्रयोग गर्नु पर्दछ ?
29. ब्याडमा सिंचाई/चिस्यान कायम गर्न कस्तो उपाय गर्नु पर्ला ?
30. माटोले ब्याडलाई छोपी सकेपछि च्याउ रोपेको कोठाको वातावरण कस्तोहुनुपर्दछ?
31. माटोले छोपेको १०-१२ दिनपछि कोठाकोतापक्रम, आर्द्रता फरक हुनु जरुरी हुन्छ?
32. च्याउ खेती गरिएको कोठाकोतापक्रम तथाआर्द्रता कायम गर्न के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिएला ?
33. कोठा भित्र हावाको संचालन बढाउन के कस्तो व्यवस्था मिलाउनु पर्ला ?
34. ब्याडमा माटोले छोपेको कति दिन पश्चात् च्याउ टिप्न तयार हुन्छ?
35. च्याउटिप्दा के कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ला?
36. टिपेको च्याउलाई कति दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ?
37. च्याउ खेती गर्दा कुन कुन अवस्थामा सरसफाईको विशेष महत्व हुन्छ?
38. गोब्रे च्याउमाकस्ता कस्ता रोगहरु देखा पर्दछन्?
39. गोब्रे च्याउमाखैरो प्लाष्टर रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ?
40. यस रोगको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
41. खैरो ब्याक्टेरिया रोग लागेको कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ?
42. खैरो ब्याक्टेरिया रोगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
43. गोब्रे च्याउमा कस्ता-कस्ता कीराहरुले सताउँछन् र तिनीहरुकोनियन्त्रणकसरी गर्नुपर्दछ?
44. यसको उत्पादन कति सम्म लिन सकिन्छ?
45. कन्येच्याउकुन कुन वस्तुहरुमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ?
46. कन्ये च्याउ खेती गर्न कस्तो तापक्रम र आर्द्रताको जरुरत पर्दछ ?
47. कन्ये च्याउको खेती गर्दा पहिलो चरणको काम के हो ?
48. कन्ये च्याउको खेतीको लागि दोश्रो चरणमा गर्नु पर्ने काम के होला ?
49. बफाएको परालमा कसरी बीउ छर्नु पर्दछ ?
50. बीउ छरेको प्लाष्टिक झोला कस्तो ठाउँमा राख्नु पर्दछ ?
51. परालमा ढुसीहरु फैलिएपछि के प्रकृया अपनाउनु पर्दछ ?
52. प्लाष्टिक झोला चिरेको कति दिनपछि च्याउ टिप्न तयार हुन्छ र कति पटकसम्म टिप्न सकिन्छ?
53. रातो च्याउ अन्य च्याउ भन्दा के फरक छ ?
54. रातोच्याउखेती गर्न कस्ता-कस्ता सामाग्रीहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
55. रातो च्याउको खेती कस्तो हावापानीमा बढी सप्रन्छ ?
56. सेतो च्याउ कस्तो किसिमको च्याउ हो र यसलाई कस्तो किसिमको हावापानीको जरुरत पर्दछ ?
57. सेतो च्याउ खेती गर्दा कस्ता सामाग्री र प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ ?
58. सेतो च्याउको उत्पादन कतिसम्म लिन सकिन्छ ?
59. सेतो च्याउमा गोब्रे च्याउमा लाग्ने रोगकीरा बाहेक पनि भिन्न प्रकारको समस्या देखिन्छ ?
Don't Miss it भुलेर पनि यी चिज अनुहारमा नलगाउनुहोस् जसले तपाइको अनुहार कुरूप बनाउदै लैजान्छ
Up Next जसलाई धरै पैसा कमाउन मन छ अपनाउँनुहोस् रतन टाटाका यी प्रभावकारी टिप्स